Shiinaha dhintey qaybo qaybo saaraha iyo qeybiye | Meesha
Na soo wac: 13530756565
Wax taaj oo kale duro
Wasakhahaasi muday caaga
Wax taaj oo kale duray Double
Balaastiig xad dhaaf ah
Gali wax taaj oo kale ah
Geedi socodka shubay dhinta
Qaybaha ridaya dhinta
Shaabad bir ah
Naqshadeynta iyo Isku imaatinka
Naqshadaynta guryaha elektarooniga ah
Naqshadaynta qalabka guriga
Naqshadeynta alaabta caaga ah
Naqshadeynta qaybta birta
Alaabooyinka is urursanaya
Tilmaamaha loogu talagalay naqshadeynta iyo balaastiga qeybaha saxda ah
Sida loo qaabeeyo qaybo caag ah
Wax soo saarka firfircoon
Die Casting & Stamp
Ku dhinta wasakhahaasi
Qaybaha caaga ah
Qaybaha balaastigga ee gawaarida
Qaybo laba-cirbad-isku-dhejin ah
Sanduuqa balaastigga ah ee guryaha lagu dhejiyo ee korantada ah
Qalabka guryaha caaga ah
Noocyada caaga ah
Sida loo sameeyo dashboard otomaatig ah
Sanduuqa isgoyska korantada iyo wax taaj oo kale
ABS wax taaj oo kale duray ABS
Qaybaha ridaya dhinta waxay ka samaysan yihiin zinc, copper, aluminium, magnesium, lead, tin iyo lead alloys daasado alwaax ah iyo alloyskooda, kuwaas oo lagu dhalaaliyo heerkulka sare laguna durayo daloolka caaryada ka dibna lagu qaboojiyo cadaadiska
Birta qayb ridaya dhintawaa nooc ka mid ah qaybaha tuuraya cadaadiska. Waa nooc ka mid ah mashiinka tuurista cadaadiska mashiinka dhinta-tuurista oo lagu qalabeeyay dhinashada ridaya. Waxay isticmaashaa biraha sida naxaasta, zinc, aluminium ama aluminium isku-darka kuleylka leh ee dareeraha ah si ay ugu shubto dekedda quudinta ee mashiinka wax lagu rido. Ka dib dhimista-tuurista mashiinka wax lagu ridayo, waxay tuuri kartaa naxaasta, zinc, qaybaha aluminium ama qaybo ka mid ah aaladda aluminium oo leh qaab xaddidan iyo baaxadda dhimashada. Qaybaha noocan ah waxaa badanaa loogu yeeraa qaybo ka-dhinta. Dareemida Die waxay leedahay magacyo kala duwan meelo kala duwan, sida qaybaha dhimista, cadaadiska tuurista, qaybaha dhimista, aluminium dhimista, zinc dhinta, naxaasta dhinta, naxaasta dhinta, zinc dhinte-casting, aluminium aluminium u dhinta-shubay aluminium dhinta-shubay, daawaha aluminium dhinta-shubay, qaybo ka mid ah aluminium u dhinta-casting, iwm
Faa'iidooyinka biraha qaybo shubay:
(1) Saxsanaanta cabbir wanaagsan (waxay kuxirantahay walxaha tuurista, laakiin 2.5cm-ta ugu horeysa (0.004 inji 1-da inch ee hore) badanaa waa 0.1mm, 0.02mm koror kasta oo 1cm ah (0.002 inji kudhowaad 1 inji kasta).
(2) Dusha sare ee siman (RA 1 - 2.5 mikroone ama 0.04 - 0.10 mikroone). Darbiyada khafiifka ah waa la tuuri karaa marka la barbar dhigo ciidda iyo shubka joogtada ah (qiyaastii 0.75 mm ama 0.030 in). Geliyeyaasha ayaa lagu dhex tuuri karaa (tusaale ahaan waxyaabaha la geliyo dunta, aaladaha kululaynta iyo dusha sare ee dhalista xoogga leh). Yaree ama baabi'inta howlaha makiinadaha labaad. Xawaaraha wax soo saarka Fast. Awoodda jiidan ee tuurista ayaa ah illaa 415 MPa (60 Ksi).
Faa'iido darrooyinka birta loo shubay
(1) Qiimaha raasamaalku aad buu u sarreeyaa. Marka la barbar dhigo hababka kale ee loo shubay, qalabka loo shubay ee loo baahan yahay, wasakhda iyo qaybaha la xiriira aad ayey qaali u yihiin. Sidaa darteed, si loo sameeyo dhimashadii geedi socodka dhaqaalaha, tiro wax soo saar ayaa loo baahan yahay.
(2) Biraha socodka sare kaliya, culeyska tuurista waa inuu u dhexeeyaa 30 g (1 oz) iyo 10 kg (20 lb).
(3) Habka loo ridayo dhimista caadiga ah, waxaa jiri doona qadar yar oo daloolo ah marka ugu dambeysa. Tani waxay ka hortagi kartaa daaweynta kuleylka ama alxanka, maxaa yeelay kuleylka wuxuu sababi doonaa fiditaanka gaaska ee daloolada, taas oo sababi doonta dildilaacyo yar yar iyo diirka dusha sare ee qaybaha, sidaa darteed cilladaha la xiriira dhimashadu waa inay ku habboon tahay oo keliya qeybaha jilicsanaanta la aqbali karo. Qaybaha u baahan qallafsanaan (adkayn ama xaalad adag) iyo tempering laguma tuuro caaryada.
Codsiga biraha qaybo shubay:
Sababta oo ah faa'iidooyinka biraha qaybo ridaya dhinta, waxaa si ballaaran loo isticmaalay, inta badan wax soo saarka mass ee casters daawaha non-ferrous. Soo saarida dhinta-tuurista, aluminium-ka aluminiumku wuxuu xisaabiyaa saamiga ugu badan, wuxuuna gaarayaa 30% - 50%; zinc alloy die-casting waa tan labaad; 1% - 2% waxa loo yaqaan 'alloy dhinta-casting'. Qaybaha ugu badan ee loo isticmaalo tuurista dhinta waa baabuurta iyo soosaarida cagafyada, oo ay ku xigto soo saarista qalabka iyo qalabka elektarooniga, iyo mashiinada beeraha, warshadaha difaaca qaranka, kombiyuutarka, qalabka caafimaadka iyo warshadaha kale ee wax soo saarka. Qaybaha ay soo saaraan habka loo shubay dhinta waxaa ka mid ah birta mashiinka silsiladda, daboolka silsiladda, sanduuqa gearbox, daboolka mashiinka, qolofka iyo qaybta qalabka iyo kamaradda, tuubbada wadajirka ah, qalabka, iwm.
qaybo ridaya dhinta biraha ypical waxaa loo isticmaalaa:
Aluminiumku wuxuu u dhintaa guryaha mootada
Aluminium warshadaha qayb ridaya dhinta
Auto aluminium Auto shubay guryaha
Zinc wuxuu u dhintaa gurisiinta
Zinc wuxuu u dhintaa saldhig
Sax Zinc dhintaa shubay guryaha watch
Guryaha elektiroonigga ah ee kamaraduhu dhintaan
Daawada Magnesium waxay u dhintaa kiiska / daboolka
Dhinta shidda qaybaha laambadda
Waalka-shubay waalka & bamka jirka
Qaybaha qurxinta dhinta
Ku dhinta qaybo naxaas ah
Qaybo ka mid ah ridaya dhinta birta ayaa loo soo saari karaa sida qaybaha gawaarida u dhinta, gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida u dhinta, qaybaha hawo-qaboojinta u dhinta, madaxa-shidaalka mashiinka mashiinka dhinta, dhinta-casting waalka dhagxaanta gacanta, dhinta-casting waalka taageerada, qaybaha awood-u-shubay, dhinta-shubay motor dhamaadka cover, qolof-u-dhiman-ridaya, qolof-bamka qolof-dhinta, qaybaha dhismaha-u-dhinta, qaybaha qurxinta u dhinta, qaybaha waardiyaha u dhinta, wheel-ka-dhinta iyo qaybaha kale. Iyada oo wax soo saarka gudaha Iyadoo la horumarinayo warshadaha qalabka, heerka qalabka mashiinka ridaya dhinta ayaa si weyn loo hagaajiyay, noocyada qeybaha la soo saari karo waa la balaariyay, iyo saxsanaanta, kakanaanta iyo cabirka qeybaha noqon kara cast cast sidoo kale si weyn ayaa loo hagaajiyay.
Qaybaha ridaya dhinta birta ayaa wali si weyn loogu adeegsadaa warshadaha, duulista, gawaarida, markabka, elektarooniga, korontada iyo warshadaha kale sababtoo ah faa'iidooyinkooda gaarka ah. Haddii alaabtaadu u baahan tahay in la isticmaalo, fadlan nala soo xiriir. Waxaan ku siin doonaa wax soo saarka iyo adeegga biraha qaybo ka ridaya dhinaceeda oo dhan.
Hore: Geedi socodka shubay dhinta
Xiga: Mashiinka CNC
Qaybo ka mid ah Die Casting
Geedi socodka shubay Die
Wasakhda birta lagu tuntay